५५ वर्षअघि नै बनेको संसारकै छिटो र सबभन्दा उचाइमा उड्ने विमान – Nepal's No. 1 News Portal, Business News, Tourism News, Sports News, Entertainment News, Tourism Year 2020, digitalkhabar.com …express media network
Home / सूचना प्रविधि / ५५ वर्षअघि नै बनेको संसारकै छिटो र सबभन्दा उचाइमा उड्ने विमान
By Digital Khabar on २६ कार्तिक २०७६, मंगलवार ११:११
तपाईंलाई थाहा छ संसारमै सबभन्दा छिटो उड्ने विमान कुन हो? सबभन्दा लामो दुरी उड्ने नि? वा, सबभन्दा धेरै उचाइमा उडेको विमान?
यस्तो विमान कुनै कम्पनीले बनाइरहेको होला भन्ने तपाईंको अड्कल हो भने एउटा महत्वपूर्ण विमानको कथा पढ्नुभएको छैन।
माथिका तीनै प्रश्नको जवाफ एउटै हो, लकहिड एसआर–७१।
यो विमान भर्खरै बनेको वा भविष्यमा बन्नेवाला होइन, ५५ वर्षअघि अमेरिकाको ‘लकहिड’ कम्पनीको ‘स्क‌ंक वर्क्स’ विभागले बनाएको हो।
तापक्रम सन्तुलन मिलाउन यो विमानमा कालो रङ लगाइएको थियो। त्यसैले यसलाई ‘ब्ल्याक बर्ड’ अर्थात् कालो चरा पनि भनिन्छ। भिन्न आकार र बनावट भएको यसको जस्तो डिजाइनमा न तत्कालीन समयमा अर्को कुनै विमान बनेको थियो न पाँच दशक पार हुँदा बनेको छ।
उड्ययन इतिहासकार तथा ‘डिजाइन एन्ड डेभलपमेन्ट अफ ब्ल्याक बर्ड’ किताबका लेखक पिटर मर्लिन यो विमानलाई आजका दिनमा पनि भविष्यको परिकल्पना भन्छन्।
‘उ जमानामा बनेको भए पनि यो अझै भविष्यमा बन्ने विमानझैं देखिन्छ। ब्ल्याक बर्डको शरीर घुमाउरो छ। पखेटा बटारिएजस्ता देखिन्छन्। बनावटकै कारण यो यान्त्रिकभन्दा बढी जैविक देखिन्छ। विमान मान्छेले बनाएका हुन् र त्यस्तै नै देखिन्छन्। तर ब्ल्याक बर्ड आफैं बनेको जस्तो देखिन्छ,’ पिटरले भनेका छन्।
यसरी बनेको थियो ब्ल्याक बर्ड
सन् १९६० मा ‘यू–टु’ नामको अमेरिकी जासुसी विमानले रुसी आकाशमा ‘एरियल’ फोटो लिँदै गर्दा गोली हानियो। अमेरिकाले पहिले उक्त विमान मौसम अनुसन्धानका लागि पठाएको भनेको थियो। रुसले कब्जा गरेको विमानका पाइलट र उनीहरूले खिचेका फोटा सार्वजनिक गरेपछि अमेरिकाले केही प्रतिक्रिया दिन सकेन।
पिटर भन्छन्, ‘सिआइएलाई ९० हजार फिटभन्दा माथि उड्ने विमान चाहिएको थियो। योसँगै जतिसक्दो तीव्र उड्ने र सम्भवतः राडारमा अदृश्य हुने विमान आवश्यक थियो।’
यस्तो महत्वाकांक्षी मेसिन डिजाइन गर्ने जिम्मा त्यो बेलाका सबैभन्दा राम्रा विमान डिजाइनरमध्येका क्लारेन्स ‘कैली’ जोन्सनले पाए। क्लारेन्स र उनका इञ्जिनियरको टोलीले स्क‌ंक वर्क्स विभागमार्फत् यो काम गरेका थिए।
टाइटेनियमले बनेको ब्ल्याक बर्ड
अर्को समस्या त्यति धेरै टाइटेनियम कहाँबाट कसरी ल्याउने भन्ने थियो। पिटरका अनुसार त्यो बेला टाइटेनियमको मुख्य आपूर्तिकर्ता नै रुस थियो। दुश्मनसँग ‘लड्न’ गोप्य रूपमा बनाउने विमानको सामान उसँगै माग्ने कुरा भएन। त्यसैले अमेरिकाले गैरकानुनी र फर्जी कम्पनीहरूबाट किनेको पिटरले जानकारी दिएका छन्।
‘यसको तयारीमै निकै सेना खटाउनुपर्थ्यो। पाइलटका लागि अन्तरिक्षयात्रीले लगाउनेझैं विशेष लुगा बनाइएको थियो। अझ तीव्र गतिमा उड्दा ककपिट एकदमै तातो हुन्थ्यो। पाइलटहरू आफ्नो खानासमेत त्यहीँ तताएर खान सक्ने भएका थिए,’ विमान सञ्चालनका जटिलताबारे पिटरले भनेका छन्।
तीबाहेक बचेका सबै ‘ब्ल्याक बर्ड’ संग्रहालयमा राखिएका छन्।
← Previous Story भान्टा र आरुमाथि फेसबुकको प्रतिबन्ध
Next Story → एनसेलले ल्यायो ‘अल नेट भ्वाइस प्याक’